समूह ‘ई’ ब्राजिललाई हुनेछैन सजिलो - खेलकुद - साप्ताहिक
प्रत्येक विश्वकपको सबैभन्दा आकर्षक टिम हुन्छ— ब्राजिल । एक त ब्राजिलको परिचय नै फुटबल भएको छ भने दोस्रो पूरा विश्वमा ब्राजिलकै समर्थक सबैभन्दा बढी छन् । पाँचपटक उपाधि जितेर ब्राजिल विश्वकप इतिहासकै सर्वाधिक सफल टिम पनि हो । त्यसमाथि ब्राजिल पूरा विश्वकप इतिहासमै अहिलेसम्म प्रत्येक संस्करणमा छनौट हुने एक मात्र टिम हो । त्यसैले ब्राजिलबिना विश्वकपको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
प्रश्न यति मात्र हो कि रूसमा हुने विश्वकपमा ब्राजिलको प्रदर्शन कस्तो हुनेछ ? विश्व फुटबलका महान खेलाडी पेलेले भनिसकेका छन्, ब्राजिल यसपटक पनि उपाधिको बलियो दावेदार हो र हुन सक्छ, उपाधि जित्ने टिम पनि ब्राजिल नै हुनेछ । हुन पनि ब्राजिलसँग विश्वकप जित्ने टिमलाई चाहिने सबै गुण छ, जस्तो एकसेएक स्टार खेलाडी, विशेषत: नेयमार । त्यत्तिकै ठूलो अर्को कारण— ब्राजिल पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा छ ।
दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनौटमा ब्राजिलको प्रदर्शन उच्च रह्यो । छनौटमा ब्राजिल नै शीर्ष स्थानमा रह्यो र यो नै त्यो टिम हो, जुन यसपटकको विश्वकपमा सबैभन्दा पहिले छनौट भएको थियो । ब्राजिलले यसपटकको विश्वकपमा राम्रो गर्ने हो भने दुईवटा चुनौती पार गर्नुपर्नेछ । पहिलो सन् २०१४ को विश्वकप सेमिफाइनलमा बेहोरेको लज्जास्पद पराजयको छायाँबाट टाढा रहनुपर्नेछ । उक्त खेलमा ब्राजिल जर्मनीको हातबाट अविश्वसनीय रूपमा ७–१ ले पराजित भएको थियो । ब्राजिललाई प्रत्येक ठूला प्रतियोगितामा त्यो पराजयको पीडाले रुवाउँछ ।
ब्राजिलसमक्ष अर्को चुनौती हो, यो समूहमा उसका प्रतिद्वन्द्वी एक प्रकारले समान रूपमा बलिया छन् । यस्तोमा रुसमा ब्राजिलको एक मात्र उद्देश्य हुनेछ, सबै टिमविरुद्ध राम्रो नतिजा निकाले । विश्व फुटबलले सदैव ब्राजिल कमसेकम नकआउट चरणसम्म पुगोस् भन्ने अपेक्षा गर्छ । यस्तो भयो भने अर्को चरणमा पुग्ने दोस्रो टिम कुन हुनेछ ? यसको उत्तर पनि सजिलो छैन । यो अर्थमा समूह ‘ई’ लाई कठिन मान्न मिल्छ ।
स्विट्रल्यान्डले युरोपेली छनौटमा राम्रो गरेको थियो र प्ले अफबाट विश्वकपको यात्रा तय गरेको थियो । छनौटमा स्विट्जरल्यान्डले एक खेल मात्र गुमाएको थियो । सन् २००६ को विश्वकपमा यही टिमले समूह चरणमा गोल खाएको थिएन । स्विट्जरल्यान्ड सन् १९५४ को विश्वकपमा क्वाटरफाइनल पुगेको इतिहास पनि छ । सन् २०१४ को विश्वकपमा कोस्टारिकाले गज्जब नै गरेको थियो, इटाली, उरुग्वे र इंग्ल्यान्ड सम्मिलित समूहबाट नकआउट चरणसम्म पुगेर ।
सर्बिया भने स्वतन्त्र देशका रूपमा दोस्रो पटक विश्वकप खेल्दैछ । सर्बिया पनि युरोपको बलियो टिम हो । यस्तोमा यी सबै तीन टिमबीच हुने खेलको नतिजाले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्नेछ, जत्तिको यी प्रत्येक टिमको ब्राजिलविरुद्धको खेलले महत्व पाउनेछ । समूह चरणमा ब्राजिलले ढुक्क भएर खेल्न सक्नेछैन, तैपनि ब्राजिललाई यी टिमले सम्भवत: रोक्न सक्नेछैनन् । त्यसैले छनौट हुने दोस्रो टिम कुन हुने हो, त्यसको रोमाञ्चकता पनि उत्तिकै रहनेछ ।